Fotoana famakiana: 2 minitra Isan-taona dia mino aho fa hanomboka hivoatra ny zava-drehetra, saingy isan-taona dia miova tanteraka ny tsena - ary tsy nisy nampiavaka azy ny 2015. Ny fitomboan'ny finday, ny fiakaran'ny doka misy ny vokatra, ny fisehoan'ny karazana doka vaovao izay nahatonga ny fiovana lehibe teo amin'ny fitondran-tenan'ny mpanjifa sy ny vola lanin'ny mpivarotra. Ity infographic vaovao avy any Kenshoo ity dia nanambara fa nitombo be teo amin'ny tsena ny fiarahamonina. Ny mpivarotra dia mampitombo ny fandaniany ara-tsosialy 50%
Fotoana famakiana: 2 minitra Splender dia nandinika fifanakalozana maherin'ny efatra tapitrisa tamin'ny tranokala 800+ hahitana ny fomba fiantsenana an-tserasera amin'ny 2015 raha ampitahaina amin'ny taona 2014. Ny Andro Thanksgiving no andro fiantsenana fahatelo ambony indrindra tamin'ny vanim-potoana niaraka tamin'ny solosaina sy elektronika nitarika fanomezana ary akanjo sy kojakoja no nisesy. fitomboana. Cyber ​​Monday dia mbola ny andro fiantsenana fialantsasatra lehibe indrindra amin'ny Internet, miaraka amin'ny 6% amin'ny varotra fialantsasatra. Na izany aza, nidina 14% ny varotra nanomboka tamin'ny 2014. Raha ny hevitro, any
Fotoana famakiana: 2 minitra Wow, herintaona! Betsaka ny olona afaka mijery ny statistikanay ary mamaly miaraka aminay… saingy tsy afaka nifaly kokoa izahay tamin'ny fandrosoana namboarin'ny tranonkala tamin'ny taona lasa. Ny fanavaozana, ny fitomboan'ny fiheverana ny kalitao amin'ny lahatsoratra, ny fotoana laniana amin'ny fikarohana, dia mandoa be tokoa izany. Nahavita izany rehetra izany izahay nefa tsy nampiakatra ny tetibola ary tsy nividy fifamoivoizana… fitomboana organika daholo izany! Ny fanesorana ireo fotoam-pivoriana avy amin'ny loharano spam referral, ity
Fotoana famakiana: 2 minitra Enina taona lasa izay, ny fanamby lehibe indrindra amin'ny varotra an-tserasera dia ny fahaizana mampifangaro, mampifanaraka ary mifehy ny fandefasan-kafatra manerana ny fantsona tsirairay. Rehefa nipoitra sy nitombo ny lazan'ny fantsom-baovao, dia nanampy andiany maro kokoa sy fipoahana bebe kokoa tamin'ny fandaharam-pamokarany ny mpivarotra. Ny valiny (izay mbola fahita matetika), dia antonta-doka maro be sy hafatra momba ny varotra nanosika ny tenda rehetra. Mitohy ny valin-kafatra - amin'ny fisakanan'ny mpanjifa fisoratana anarana sy miafina amin'ireo orinasa iasan'izy ireo